Labada aqal ee Baarlamaanka oo maanta la filayo in ay si wadajir ah u ansixiyaan miisaaniyadda 2020ka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Labada aqal ee Baarlamaanka oo maanta la filayo in ay si wadajir...
Xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah la filayaa inay wadajir u ansixiyaan Miisaaniyadda Sanadka 2020, kaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen.
Ansixinta miisaaniyaddaan ayaa ku soo beegmaysa maanta oo ah maalintii ugu danbaysay sanadka 2019, si sanadka 2020 oo berri ka bilaabanaya loogu shaqeeyo miisaaniyadda cusub.
Xildhibaannada labada ayaa maalmihii la soo dhaafay su’aalo ka weydiinayay miisaaniyadda Wasiirka Maaliyadda, waxaana su’aalaha ay u badnaayeen sida loo isticmaalayo iyo qarashaadka loo qoondeeyay hay’adaha dowladda, iyadoo ay xusid mudan tahay in mushaarka ciidamada la kordhiyay, lana gaarsiiyay illaa $200 bil walba.
Ansixinta Miisaaniyadda ayaa noqon doonta tii u horeysay oo ay wadajir u ansixiyaan labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka, iyadoo horay ay Miisaaniyadda u ansixin jireen Golaha Shacabka oo kaliya
Miisaaniyadda sanakda 2020 ayaa gaaraysa $459.5 Milyan,waxayna ka kooban tahay dakhliga gudaha iyo deeqaha dibadda ka imaanaya ee lagu kabayo Miisaaniyadda dowladda Federaalka.
Al-shabaab iyo Ciidanka Dowladda oo Dagaalamay
Madaxweynaha Tansaaniya ayaa su’aal ka keenay Qalabka lagu Tijaabiyo coronavirus kadib...